Brenton Harrison Tarrant ညာဘက် Anti-အကြမ်းဖက်ဝါဒတူရကီ၏နိဒါန်းကိုရပ်တန့်သလဲ? မာတင် Vrijland
Brenton Harrison Tarrant ညာဘက် Anti-အကြမ်းဖက်ဝါဒတူရကီ၏နိဒါန်းကိုရပ်တန့်သလဲ?
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 17 2019 အပေါ်	• 10 မှတ်ချက်
ကျွန်တော်သူလို Brenton Harrison Tarrant ပတ်သက်. နောက်ဆုံးပေါ်အစီရင်ခံစာများယုံကြည်ဖို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင် လိုအပ်သောခရီးစဉ် လုပ်အဓိကအားဖြင့်သဘာဝသမိုင်းဖြစ်ပုံရသည်။ မိမိအခရီးစဉ်အကျိုးအမြတ် Bitconnect (crypto ငွေကြေးကို) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေလာလိမ့်မယ်ငွေကြေး။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးယုံကြည်စှပျစှဲမှနျကနျကွောငျးရာခခြေကျြတူနေတယ်။ အများစုမှာဒီကဗျာ Tarrant အော်တိုမန်အင်ပါယာ၏မြင့်တက်တိုက်ထုတ်ချင်ဟန်သောအစီရင်ခံစာများဖြစ်ကြသည်။ Tarrant တူရကီနှင့်ပါကစ္စတန်နှစ်ဦးစလုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြလိမ့်မယ်, အလွန်ဘာသာရေးနှင့်သမိုင်းကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းနှစ်နိုင်ငံ။ Anders ဘရီဗစ်နှင့်အတူ link ကိုလည်းလျှောက်ထားသည်။ ဘူဂေးရီးယားသတင်းရင်းမြစ် Cyrillic တှငျတှေ့လက်နက်ပေါ်တွင်ကျောက်စာတိကျမ်းစာ၌လာသည်သောနယူးဇီလန် Herald သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါကျမ်းကျော်ကြားတိုက်ပွဲ၏အမည်များဖြစ်ကြသည်နှင့်ဘော်လကန်ကနေသမိုင်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများကိုပြ။ ဤရွေ့ကားတိုက်ပွဲများအော်တိုမန်အင်ပါယာကိုစစ်တိုက်ခဲ့ကြသည်။ အော်တိုမန်တူရကီဆန့်ကျင်စစ်ပွဲများကိုလည်းနော်ဝေအကြမ်းဖက်သမား Anders ဘရီဗစ်အဘို့အလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအရင်းအမြစ်ခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာ "ခရစ်ယာန်" နှင့်မွတ်စ်လင်များအကြားတင်းမာမှုကြီးမြတ်ထွဋ်မှဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခံရဖို့အကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းပုံရသည်။ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ငါတို့သည်ညာဘက်အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏လျင်မြန်စွာမြင့်တက်မြင်ရပါလိမ့်မည်ဆိုပါကထို့ကြောင့်အံ့သြသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒီဖြစ်ကောင်းတစ်ခုလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ, လျှို့ဝှက်န်ဆောင်မှုနောက်တဖန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအအုပ်စုကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ငါ link တစ်ခု Fethullah Gulen (ထို FETO ကြောက်မက်ဘွယ်သောအအုပ်စုကိုအဖြစ်တူရကီတို့ကအမည်တပ်ထားသော) နဲ့တည်လိမ့်မည်လည်းမရှိသံသယရှိကြသည်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့ Tarrant သည်ဤအကြမ်းဖက်ဆဲလ်တွေအတွက်အုတ်မြစ်မှအစည်းအဝေးများဖွဲ့စည်းကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းဖို့တိုတောင်းသောသက်တမ်းအတွင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ရလိမ့်မည်ဟုသံသယရှိကြသည်။ သငျသညျအဟောင်းများကိုဆီသို့ဦးတည်လုပ်မယ့်ဘော်လကန်ကွန်နက်ရှင်ဖြစ်နိုင်ပါသည် - Related ယူဂိုဆလားဗီးယားစစ်ပွဲ - ဆာ့ဘတိုက်လေယာဉ် (ဟောင်းအော်တိုမန်ရန်သူ) ။ ဒါကကျနော်တို့ကိုပိုပြီးမွတ်စ်လင် (နှင့်အထူးသဖြင့်တူရကီ) မှာ (ငါ့မျက်မှောက်၌ PsyOp-) တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တူရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုမြင်သည်ဟုဆိုလိုနိုင်ဘူး။
Lees ဤနေရာတွင်ပြန်သွားကြဖို့ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဖန်ငါ့မျက်မှောက်၌ဒီမှာ PSYOP (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး) ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတူရကီမှတစ်ဆင့်ဥရောပစားသုံးမှုဟောကိန်းထုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြင့်ငါ့ကိုများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးသားထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို right-တောင်ပံခရစ်ယာန်အခြေခံဝါဒီကြောက်မက်ဘွယ်သောအအုပ်စုများ၏မြင့်တက်ပြီး link ကိုသက်သေခံပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကလည်းဆားဘီးယားနှင့် FETO နှင့်အတူတည်လိမ့်မည်ကြောင့်, လက်ျာဘက်ဥရောပတိုက်တွင်အမှုအရာ setting ခံရဖို့အာဒိုဂန်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောစှပျစှဲမှနျကနျကွောငျးရာခခြေကျြပါပဲ။ ဒါကြောင့်ကျွန်မအော်တိုမန်အင်ပါယာ 2023 များအတွက် recover လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသော script ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်ငါသည်ဤကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ဤသည်ဇာတ်ညွှန်းဘာသာရေးပရောဖက်ပြုချက်နှင့်တွေ့ဆုံနှင့်သူ၏အဖော်သူသုံးကမ္ဘာကြီးစစ်ပွဲများဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့ Giuseppe Mazzini မှ 1871e စကော့တလန်စီးနင်ဒီဂရီ Freemason အဲလ်ဘတ်ပိုက်၏ 33 ၏အက္ခရာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဤအမှု၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုဇာတ်ညွှန်းအရသိရသည်ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး၏ပြည်နယ်တည်ထောင်ရန်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်။ တတိယကမ္ဘာစစ်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရလိမ့်မည်နှင့်အစ္စလာမ့်ကမ္ဘာနှင့်လာတာတွေဟာအစ္စရေးနိုင်ငံကမ္ဘာ၏အကြွင်းအကျန်များအကြားအရပ်ဌာနကိုယူပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏မကျြမှောကျ၌ပွနျလညျတညျထောအော်တိုမန်အင်ပါယာအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးအပေါင်းအမေရိကန်အကြားစစ်တိုက်ထင်ရမယ် အော်တိုမန်အင်ပါယာ၏မြင့်တက်ငါ၏ခန့်မှန်း၏ပြည့်စုံထောက်ခံမှုတွေ့ ဤဆောင်းပါးတွင်။ ဒါဟာမှတ်ချက်ယူရန်အလွန်အသုံးဝင်သောလက်ရှိဖြစ်ရပ်များ၏နားလည်မှုဆက်စပ်၌တည်ရှိ၏။ ဒါကြောင့်နီးကပ်စွာဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။
ရဲ့လာမယ့်အချိန်မက်ဆေ့ခ်ျအဘို့စောင့်ဆိုင်းပါစို့, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တိုက်ခိုက်မှုလှိုင်းလုံးတွေ့မြင်နှင့်လက်ျာ-တောင်ပံကြောက်မက်ဘွယ်သောအရုတ်တရက်ထို့နောက် အကယ်. သင်ဤခန့်မှန်းချက်ကိုထပ်သတိရပေါ်လာဖို့ box ထဲကတစ်ဦးမာရ်နတ်အဖြစ်ကောင်းစွာစနစ်တကျဖြစ်ပေါ်လာသောလျှင်။
အပေါ် Read ဤဆောင်းပါးတွင် ဇာတ်ညွှန်းမှတဆင့်ကြည့်ရှုရန်သင်ယူဖို့ဘယ်လို။
source link ကို entries တွေကို: rt.com
နေတိုးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ: အီးယူမှတူရကီရဲ့ Access ပတျဝနျးကငျြအလားအလာပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်. သတင်းမီဒီယာအသံတိတ်
ယခု မှစ. တူရကီသမိုင်းသင်ခန်းစာAtatürkဒတျချြကျောင်းများအီးယူမကြာမီအော်တိုမန်ခေတ်ကသိမ်းပိုက်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်
စတင်ကြစို့! အားလုံးစာဖတ်သူများမှတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာနှင့်ကျန်းမာ 2019!
Tags:: ဆန့်ကျင်, Bitconnect, Brenton, အစွန်းရောက်, အထူးပြုလုပ်ထားသော, FETO, Harrison, အော်တိုမန်, မှန်သော, ကြွယ်ဝသော, Tarrant, အကြမ်းဘက်ဝါဒ, ကြက်ဆင်
17 မှမတ်လ 2019 00: 57
သူက Hagia Sophia ဖျောပွအွန်လိုင်း posted ရှိသည်ဟုယူဆနေသည်တစ်စာတမ်းတွင်အတွက် Tat ဖြည့်စွက်, Erim Said "ကျနော်တို့ကလည်းသူကတူရကီအတွက်အစောပိုင်းခရစ်ယာန်အပိုငျးအများနှင့်ဆိုဒ်များအများကြီးထံသို့ ဝင်. knowthat" ။
အဆိုပါ Hagia Sophia 1453 တဲ့အခါမှာအော်တိုမန်အင်ပါယာအောင်နိုင်အစ္စတန်ဘူလ်သည်အထိယခင်ကဂရိသြသဒေါက်ခရစ်ယာန်ကြီးစိုးဘုရားကျောင်းမှာလက်ရှိအစ္စတန်ဘူလ်တစ်မှတ်တိုင်ဗလီ-လှည့်-ပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
17 မှမတ်လ 2019 00: 59
အဆိုပါဆာ့မူလအစအတွက်သြသဒေါက်ဂရိဖြစ်ကြပြီးကျနော်တို့ (ဖြစ်နိုင်သည်) ဆားဘီးယားနှင့်အတူ link တစ်ခုရှိပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
may 29 ၏နေ့စွဲ Keep - 1453 အတွက် Constantinople ၏ကျဆုံးခြင်း၏နေ့စွဲ; အော်တိုမန်ခေတ်က Constantinople ၏ဖမ်းယူခြင်း။ ဗိုင်ဇန်တိုင်းအင်ပါယာ၏အဆုံး
ကျွန်တော်တို့ဟာအစ္စတန်ဘူလ်တစ်ဦးကို right-အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု (ယခင် Constantinople) ကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါသလား?
17 မှမတ်လ 2019 01: 04
က Fethullah Gülenလွှဲအပ်ငြင်းဆန်သောကြောင့် Right-အကြမ်းဖက်ဝါဒဖြစ်ကောင်းလည်း, Donald Trump နေဖြင့်တူရကီနှင့်ဆက်စပ်ပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် link ကို Trump နှင့်အစွန်းရောက်လက်ယာ (စသည်တို့ကို Infowars အဲလက်စ်ဂျုံးစ်ကဲ့သို့) (စာရင်းစစ်) အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာအကြားဖြစ်လိမ့်မည်လည်းလုပ်နိုင်ပါသည်နှင့်နွား definitef နောက်ကျောအဟောင်းမီဒီယာနှင့်အဟောင်းသောနိုင်ငံရေးအလို့ငှာမှမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆန့်ကျင်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်မီဒီယာနှင့် "ကွဲပြားခြားနားသော" သမိုင်း revisionists ၏ဝေဖန်မှုများပပျောက်စေရန်။
18 မှမတ်လ 2019 23: 49
ကားကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူအနေဖြင့်ရိုက်ကူးခဲ့သည့် Facebook ပေါ်မှာဖြန့်ဝေတဲ့ဗွီဒီယိုရှိပါသည်။ နောက်ခံအတွင်းရေဒီယိုတွင်အစွန်းရောက်ဆားဗီးသီချင်းတီးခတ်။
18 မှမတ်လ 2019 23: 53
သင်သည်ထိုဗီဒီယို link တစ်ခုရှိသလား
19 မှမတ်လ 2019 17: 29
ဒါဟာဘဝရဲ့စီးခဲ့ပေမယ် YouTube ကိုဗီဒီယို (ကဲ့ရဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ... ?) အားဖယ်ရှားခဲ့ကြပုံရသည်
17 မှမတ်လ 2019 02: 44
17 မှမတ်လ 2019 14: 54
2017 နှင့် 2018 အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားနားလည်သဘောပေါက် Tarrant စစ်သားတစ်ယောက်ကနေတဆင့်မှတဆင့်။ အရာတိုင်းပြည်ခန့်မှန်း?
17 မှမတ်လ 2019 18: 46
@ Zonnetje ။ အရင်းအမြစ်များကဲ့သို့အချက်အလက်နဲ့။ ဖြေကိုခေါ်လိုသောမေးခွန်းများကိုအပါအဝင်အကြံပြုထားသည့်နည်းနည်းတန်ဖိုးကိုရှိသည်။
30 မှမတ်လ 2019 15: 33
« သေနတ်သမား Brenton Tarrant (တိုက်ရိုက်စီး) ခနယူးဇီလန်၏ဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူး
နယူးဇီလန်ကိုရပ်တန့်အဓိပ္ပာယ်တည်ထောင်ခြင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု, လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်လူဦးရေ polarization ကို »
အဘယ်ကြောင့်လိင် 21e ရာစုလိင်ကွဲပျောက်ကွယ်သွားများအတွက်အသစ်များကိုစံတစ်ခုဖြစ်သည်
Wilfred Baker op အဆိုပါခန့်မှန်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဖိုရမ် (FVD) debacle
ကင်မရာ2op အဆိုပါခန့်မှန်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဖိုရမ် (FVD) debacle
ကင်မရာ2op အဘယ်ကြောင့်လိင် 21e ရာစုလိင်ကွဲပျောက်ကွယ်သွားများအတွက်အသစ်များကိုစံတစ်ခုဖြစ်သည်
bartelo op အဆိုပါထောက်ခံသူများတိုက်ခိုက်နေ "မတူကွဲပြားမှုများနှင့်နိုင်အောင်" စဉ်းစားနေစဉ်အတွင်းအဆိုပါသက်တံ့ကတော့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ဘာသာတရားဖြစ်ပါသည်
Danny op ဘယ်လိုအန္တရာယ် 5G အမှန်တကယ်သည်နှင့်မည်သို့လျှို့ဝှက်စွာတပ်ဆင်ပြီး
1.614 သည်အခြား subscriber များအား join